Commander One Pro amidy mandritra ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
Commander One Pro amidy mandritra ny fotoana voafetra
Raha ny momba ny fitantanana rakitra, ny Finder no hany safidy ananantsika amin'ny tanindrazana, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mety hianjera izany, indrindra raha zatra miasa isan'andro koa miaraka amin'ny Windows, izay misy ny mpikaroka rakitra dia mamela antsika hiditra ao amin'ilay lahatahiry tiantsika sy ataontsika ary manafoana ny faniriantsika. Amin'ny maha mpampiasa ny rafitra fikirakirana ahy roa dia tokony hanaiky aho fa mahazo aina kokoa amin'ilay mpikaroka rakitra Windows aho fa tsy amin'ny Finder. Saingy noho ny fampiharana Commander One Pro dia niova be ny hevitro.
Commander One Pro dia rindranasa ahafahantsika mitantana ny tsirairay amin'ireo rakitra izay tahirizinay amin'ny solosaina, fa tsy eo an-toerana ihany, fa afaka mitantana ihany koa isikaTantano ny rakitra izay notehirizinay lavitra na amin'ny rahona toa an'i Dropbox, iCloud ... na amin'ny mpizara FTP, hitazomana pejy web.
Miaraka amin'ny Commander One Pro dia afaka mamorona, mamafa, manokatra, mamindra ary manome anarana ny rakitra sy lahatahiry mora foana isika, ankoatry ny fampiasana fanitarana hitadiavana rakitra amin'ny fomba haingana kokoa. afaka manao dingana maromaro izay miara-mandany fotoana, satria rehefa mamorona azy ireo isika, dia ho ampiana amin'ny filaharana ireo mba hanatanterahana amin'ny fomba haingana kokoa noho ny hoe miaraka mamono azy ireo.
ihany koa mamela antsika hiditra lavitra amin'ny mpizara FTP, SFTP na FTPS, izay hanehoany antsika ireo lahatahiry eo an-toerana sy lavitra mba hahafahantsika mamindra rakitra amin'ny fomba tsotra kokoa, amin'ny fisintomana fotsiny. Saingy mamela antsika hanova ny fahazoan-dàlan'ny fisie ihany koa izany, zavatra izay amin'ny tranga maro dia azontsika atao ihany amin'ny tranokala web izany.
Mikasika ny fitantanana serivisy rahona, Commander One Pro dia mamela antsika hanokatra takelaka samihafa amin'ny tsirairay amin'ireo serivisy izay ampiasainay, fa mamela antsika ihany koa hanangana rahona manokana an-tserasera. Ho fanampin'izany, mamela antsika hamoritra sy hamoahana rakitra koa araka izay itiavantsika azy sy araka izay ilainay.
Commander pro dia vidiana matetika amin'ny € 29,99, fa mandritra ny fotoana voafetra lna afaka jerentsika ao amin'ny Mac App Store izany amin'ny 1,99 euro.
Commander One PRO - mpanjifa FTP€ 29,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Commander One Pro amidy mandritra ny fotoana voafetra
Amin'ny maha mpampiasa ahy maharitra an'i Commander Norton dia io no fampiharana voalohany notadiaviko ho an'ny Mac ary ity no fampiharana mandeha tsara indrindra.